कपालु कोरेर VS पासपोर्ट हरियो ( समीक्षा ) - NEPALI KALAKAR
कपालु कोरेर VS पासपोर्ट हरियो ( समीक्षा )
nepalikalakar March 19, 2020
कपालु कोरेर VS पासपोर्ट हरियो
बिषयवस्तु र परिवेश
समानता र असमानता
सङ्गीत पक्ष तथा गायन
निर्देशन र अभिनय
“कपालु कोरेर” र “पासपोर्ट हरियो” मेरा लागि उति नै प्रिय गीतहरु हुन् । हुन त परदेशी भएर होकि किन किन यस्ता गीतहरु सुन्नासाथ मनमा बसिहाल्छन् । कति मन छुने र यथार्थ छन् यी गीतका शब्दहरू । कति मुटु रेट्ने खालका छन् सङ्गीतहरु अनि गीतमा देखाइएका दृश्यहरुले आफु परदेश हिड्दाको दिनको सम्झना गराउछन् । म पनि सानै उमेरमा परदेश हिडेको मान्छे । आफू जन्मेको घर छोडेर अनि आफ्नो प्यारो देश छोडेर हिड्दाको दिन मलाई कस्तो महसुस भएको थियो अलिकति हजुरहरुलाई नि सुनाउन चाहन्छु ।
म हिड्दाको अघिल्लो रात आमाले खाना नै खाइनन् । एकोहोरो मलाई हेरिरहन् । उमेरले म बिदेश जानका लागि योग्य ठहरिए पनि आमाका नजरमा त म सानै छु नि सधैं । आफ्ना आँखा बाट पल भर नहेट्ने मेरो मुहार, अब दुई बर्ष सम्म देख्न पाउदिन भनेर सोच्दै थियौ होला नि है आमा । तिम्रो मुहारमा मलिनता नछाओस् भनेर मैले नि घर छोड्दा कुनै दुख नलागे झै गरेको थिए । तिम्रो ममताको आँचल बाट टाढिन पर्दा म कति डराएको थिए मलाई मात्र थाहा छ । आमाको काख भन्दा सुरक्षित ठाउँ कहाँ होला र । म त त्यै काख छोडेर सयौं कोस टाढाको यात्रा तय गर्दै थिए । म कति अन्योलमा थिए । रातभर निद लागेन अनि कति छिट्टै मिर्मिरे भयो पत्तै पाइन ।
बिहानै दिदीले थालीको रातो टीका लगाइदिदै गर्दा बगाउनु भएका आँशुका ढिकाको मूल्य कहाँ चुकाउन सकुला र । पिढिको छेउमा बसेर भाइले टुलुटुलु हेर्दै थियो । स्कुलमा होमवर्क नगरेर मिसले गाली गर्दा – “मेरो दाईलाई भन्दिन्छु” भन्ने भाइ सायद त्यतिबेला यै सोच्दै थियो कि अब देखि मलाई कसैले केही भन्यो भने कस्लाई भनुला ।
प्रवासी जीवन अनि कोरोना वाट त्रसित मन । घर सम्झेर बढ्दो बेचैनी । बुढसकालका बाबा आमा मेरो साहारा खोज्दै होलान् म मरुभूमिमा बालुवा भित्र हीरा खोज्दैछु । कम्जोर आमाको साहारा आज खाडीको सेखलाई पहरा दिदैछ । छोरो हुर्काए बुढेसकालमा साहारा पाइन्छ भन्ने भ्रम पनि सायद हटिसक्यो होला है आमा ! तिम्रा फाटेका कुर्कुच्चा अनि चहराएका पैतलालाई मलम खोज्दै कहाँ आइपुगे कहाँ । बाबाले औंला समाउदै ताते ताते गरेर हिड्न सिकाउनु भयो । आज थर्थर काप्दै भित्र बाहिर गर्दा झलक्क मलाई सम्झनु हुन्छ होला । जो भएनी त्यस्तै रैछ जस्तो लाग्दो हो ।
परदेशीका पनि आफ्नै बाध्यता छन् । न त भनेको समयमा छुट्टि नै पाइन्छ न त चाहेको बेला परिवार सँग कुरा नै गर्न पाइन्छ । साच्चै परदेशीहरुले “कपालु कोरेर” र “पासपोर्ट हरियो” जस्ता गीतहरु सुन्दा आँखा भरी आँसु पारेर आफ्नो घर परिवार अनि आफ्नो देश सम्झन्छन् ।
दुबै गीतहरुको बिषयवस्तु उस्तै छ र परिवेश भने हल्का पृथक छ । तैपनि दुबै गीतहरुमा आफ्ना बाबा आमा र आफ्नी प्यारीलाई छोडेर परदेश हिड्दाको पीडा देखाइएको छ । हुन त नेपालीहरु परदेश जानु आउनु आज भोलि पानी पधेरो जस्तै भैसक्यो तैपनि यति यथार्थ छन् की यी गीतहरु सुनेर मनै चसक्क हुन्छन् । भलै यी गीतहरु काल्पनिक हुन् तर विषयवस्तु र परिवेश हाम्रै सेरोफेरो र भोगाइको भएर होला सबैको मन छुन्छन् ।
दुबै गीतमा भेटिएका समानता
दुबै गीतमा सर्जक कै शब्द र सङ्गीत रहेको छ ।
दुबै गीतमा सर्जक आफैले आवाज दिएका छन् ।
दुबै गीतका एरेन्जर, रेकर्डिष्ट र रेकर्डिङ स्टुडियो यौटै छन् ।
दुबै गीतमा पासपोर्ट भन्ने शब्द लाई बिशेष महत्त्व दिएको छ । दुबै भिडियोमा गीत नसकिन्जेल पासपोर्ट केटीकै हातमा हुन्छ ।
दुबै गीतका केही असमानता
“कपालु कोरेर” मा चर्चित लोकदोहोरी गायिका सम्झना भन्डारीको आवाज छ भने “पासपोर्ट हरियो” मा नबोदित गायिका अस्मिता बुढाथोकीको आवाज रहेको छ ।
“कपालु कोरेर” को थेगो पुरानो गीतबाट साभार गरिएको हो जसका सर्जक तथा गायक स्व. तिर्थ बहादुर गन्धर्व हुन् भने “पासपोर्ट हरियो” को थेगो स्वयं सर्जककै रहेको छ ।
दुबै गीतहरुमा समाबेश शब्दहरु साह्रै मीठा र यथार्थ छन् । त्यसो त खेम सेन्चुरीलाई गीतकार भन्दानी सङ्गीतकारको रुपमा बढी रुचाइन्छ भने गणेश अधिकारीलाई शब्द सङ्गीत दुबै बिधामा उत्तिकै मन पराइएको छ ।
“कपालु कोरेर” का शब्दहरु :
स्वर्गीय गायक तथा सर्जक तिर्थ बहादुर गन्धर्वको पुरानो र लोकप्रिय गीत “कपालु कोरेर” को थेगो यस गीतमा समाबेश गरिएको छ । गीतको सुरुवातको यो भनाइले गीतलाई अझ मार्मिक बनाएको छ – “यो घर परिवार समाज, आफ्नै आँगन सम्म पुग्न साथी चाहिने बेलाका बा, दुई मुठी जाउलो पनि अर्कैले खुवाइदिनु पर्ने बेला भएकी आमा, भर्खरै आफ्नो जन्मघर छोडेर म सँग बिहे गरी आएकी प्यारी श्रीमती, आफैले आज सम्म खेलेको यो पाखा पखेरो अनि आफ्नै साल नाल गाडेको प्राण भन्दा प्यारो धर्ती यी सबै छोडेर कहिल्यै नदेखेको बिरानो मुलुक पुगेर रगतलाई पसिनाएर बेच्ने रहर त कहाँ थियो र मेरै देशमा बसेर कर्मले देश बदल्छु भन्ने सोंच र साहस गर्ने मान्छे, के गरिन यहाँ ? तर यहाँ जे गरे पनि साँझ बिहान हात मुख जोड्न पनि त धौ भयो । अनि अमिलो मन पारेरै होस् कठोर निर्णय गर्नु र परदेश हिड्नु बाहेक म सँग के नै विकल्प रह्यो र” ।
कसोरी जानी हो मयालाई छोडेर !!!
नजाउन मयालु एकलै छोडेर !!!
देउन सानू पासपोर्ट र झोला
दुई चार वर्ष अब भेट् नहोला !!
बिहे भाको वर्ष दिन भाछैन
तिम्लाई जानै दिन मन लाछैन !!
चल्दो रैन्छ मायाले घर
रुदै बाटो छेक्ने काम नगर !!
तिमी जाने जहाजैमा चढाइ
मिल्दैन र लैजान मलाई !!
धनको भारी बोकेर फर्किन्छु
यत्ति भन जीवन भर पर्खिन्छु !
कि त आँधी कि काली पसुला
कस्को मुख हेरेर बसुला !!
शब्द : खेम सेन्चुरी
सङ्गीत : खेम सेन्चुरी
आवाज : खेम सेन्चुरी र सम्झना भण्डारी
“पासपोर्ट हरियो” का शब्दहरु :
यस गीतको सुरुवातमा प्रस्तुत गरिने वार्तालापले चसक्क मन छुन्छ – ” छोराको भिसा लाग्यो रे छोरा बिदेश जाने रे रिन गरेर ल्याए पैसा “
घर धानेर बस है पियारी आफु त मुगलानी परियो !!
कस्तो दिनमा परदेशीको मायाको सिरैमा सिन्दूर भरियो !!
अङ्गालोमा बेसरी टाँसेर
शुभ यात्रा भन्देउन हाँसेर !
आँसु ढिका बर्सिन थालेनी
कति छिट्टै बासेको भाले नि !
नाङ्गो ढाक्न लुगा र भोजन
जानै पर्छ परदेशमा खोजन !
कति साह्रै गरम खै बिन्ती र
बरु घर खेत बेचेर रिन तिर !
पर्छ मेरो मुटुमा गाँठो
रुदैं रुदैं नछेक मुल बाटो !
नछुटाइदेउ मायाको काख
खाम्ला बरु नपुगे एक छाक !
शब्द / लय : गणेश अधिकारी
आवाज : गणेश अधिकारी र अस्मिता बुढाथोकी
दुबै गीतहरुका सङ्गीत मौलिक पाराका र मन छुने छन् । सुन्नासाथ टपक्कै टिपेर गाउन सकिने खालका छन् । खेम सेन्चुरीका हर सङ्गीत उतिकै लोकप्रिय छन् । समग्रमा खेम सेन्चुरी, सम्झना भन्डारी, गणेश अधिकारी र नवगायिका अस्मिता बुढाथोकीको आवाजले गीतलाई अझै मिठासपुर्ण र मर्मस्पर्शी बनाएको छ । नबोदित गायिका अस्मिता बुढाथोकीको आवाजका प्रसंसक यस गीत मार्फत झन् बढेका छन् ।
कपालु कोरेर मा कथा, निर्देशन र अभिनय स्वयं बिनोद भण्डारी आफैले गरेका छन् भने पासपोर्ट हरियोमा चाहि पछिल्लो समयमा अति ब्यस्त र चर्चित निर्देशिका स्‍मृति तिमिल्सिना गुरुआमाको निर्देशन रहेको छ । त्यसो त दुबै निर्देशक आफ्नो मेहेनतमा अब्बल देखिन्छन् । त्यसै गरी कपालु कोरेर मा बिनोद भण्डारी र जुना गुरुङको अभिनय रहेको छ भने पासपोर्ट हरियोमा सारिका केसी र राजन बिक को अभिनय रहेको छ । समग्रमा सबै कलाकारहरुको उत्तिकै जोडदार अभिनय रहेको छ ।
यौटै भावको दुई गीत एकै पटक बजारमा उत्तिकै लोकप्रिय हुनु पक्कै पनि चानचुने कुरा होइन । दुबै गीतका गायक गायिका मोडलहरु निर्देशक अनि सम्पूर्ण टिमको धेरै मेहेनत र परिश्रमको कारण दुबै गीत लाखौं दर्शक श्रोता माझ लोकप्रिय हुन पुगेका हुन् ।
मौलिक लोकदोहोरी गीत – हे बरै ! सार्वजनिक
6 thoughts on “कपालु कोरेर VS पासपोर्ट हरियो ( समीक्षा )”
साह्रै मन पर्यो सर हजुरको लेखाइ अनि समीक्षा गरेका हर पक्ष । दुबै गीत उतिकै राम्रा छन् ।
भाइ प्रिय कुमार एकदमै राम्रो र समसामयिक बिषयलाई चित्रण गरेको अनुभूति गरे मैले। धन्यवाद तिमीलाई यति राम्रो लेख को लागि।
मीठो गीत अझै मीठो लेखाई..
राम्रो समीक्षा गर्नु भो सर ।